Tonga teo ny tompon'andraikitra fa tsy nitondra fitaovana fitsapana na fameloman'aina. Tsy nanao ny famonjena voalohany vonjimaika, fa avy dia nitondra filanjana ny mpiasa mpiambina sasany.
Tsy noentina tao amin'ny infirmerie, fa nentina niakatra hitady fiara hitondrana azy any amin'ny hopitaly. Nitohana tanteraka anefa ny lalana noho ireo fiara avy nanatitra mpianatra, ka ela vao nahita fiara hitondra ilay zaza any amin'ny hopitaly Polyclinique Ilafy, saingy teny an-dalana dia tapitra ny ainy.
Misy toeram-pitsaboana anisan'ny raitra ilay sekoly analan'ity zazalahy ity fanadinana raha misy hamehana.
Tohina tanteraka ireo mpianatra nanala fanadinana rehefa nolazain'ny surveillant manta be ny hoe maty ilay zazalahy.